IZA W E IREO Shandong Oree Laser ny teknolojia Co.Ltd
Isika no fanampiny Shandong OYADE orinasa ny vondrona, miorina ao Jinan Avaratra ny fampandrosoana ara-toekarena faritra, JiYang orinasa zaridaina, manana mpiasa 300, 1000 metatra toradroa fikarohana sy mampitombo foibe, 42000 metatra toradroa atrikasa.
INONA NO WE ATAO
Shandong Oree Laser ny teknolojia Co.Ltd
Ireo rehetra ireo fitaovana efa be mpampiasa ao amin'ny famokarana ny elektronika fitaovana, Integrated faritra,
fifandraisan-davitra fitaovana, solosaina, Auto faritra, fitaratra sy Optical venty, fanorenana fitaovana,
ny fitsaboana fitaovana, jewelries, fonosana fitaovana, asa-tanana, lamaody sy ny fitafiana, tanàn-dehibe nanazava sy saha hafa.
Tsirairay vokatra avy amin'ny Oree Laser dia mafy mandinika araka ny ISO9001 (QCS) fenitra eo anoloany dia hitafy ho any an-tsena. Maro tamin'ny laser andian-dahatsoratra fitaovana efa nahazo taona, FDA fanamarinana.
Oree Laser mifantoka amin'ny mpanjifa lanjany, miteraka ambony kokoa noho ny mpifaninana cusotmer sarobidy. Ny vokatra no mpivaro-bary tamin'ny Etazonia, Kanada, Aostralia, Eoropa, Afrika Atsinanana Atsimo ect, mihoatra ny 80 firenena sy ny faritra.